Taasi waxay sii deyneysaa iPad aad ku haysan karto si tartiib tartiib ah. Waxay noqon kartaa xiriirka Internetka oo liita oo keenaya dhamaan arimaha waxqabadka, taas oo ah sababta awoodda aad u tijaabin lahayd xawaaraha Internetka ee iPad-ga aad muhiim u tahay dhibaatooyinka dhibaatada. Barnaamijyada badan waxay ku tiirsan yihiin shabakadda, xiriirka xunna wuxuu saameyn ku yeelan karaa siyaabahan kala duwan.
Si aad u tijaabiso iPad-kaaga, waa inaad soo dejisid Ookla's Test Speed ​​Speed ​​Test. App waa download lacag la'aan ah. Si aad u tijaabiso xawaaraha Wi-Fi ee iPad-kaaga, si fudud u-soo-saarka barnaamijka, sii oggalaansho si aad u isticmaasho adeegyada deegaanka haddii ay waydiisato, oo ku dhufo badhanka "Begin Test".
Imtixaanka Ookla wuxuu u muuqdaa sida gaari-socodka baabuurkaaga, oo u eg sida xawaaraha, uma baahnid inaad ku dhufato xawaarihii ugu sarreeyay si aad isu diiwaan galiso xiriirka soonka. Ma jirto wax laga walwalo haddii aadan korin. Waxay runtii ku xiran tahay sida aad iPadka u isticmaasho.
Waa inaad tijaabisid xiriirintaada in ka badan hal mar si aad u hesho fikrad ah xawaaraha celceliskaaga. Waxaa suurtogal ah Wi-Fi in uu hoos u dhaco dhowr ilbiriqsi ka dibna dib u soo noqosho mar kale, markaa baaritaanno badan ayaa la socdaa kala duwanaansho kasta oo wareersan.
Haddii aad hesho xawaar xumi, sida mid ka hooseeya 5 MBS, isku day inaad u guurto meel ka duwan gurigaaga ama aqalkaaga. Marka hore, isku day inaad tijaabiso xawaaraha taagan ee ku xigga router-kaaga kadibna u gudub qaybaha kale ee gurigaaga. Marka calaamadda Wi-Fi ku socoto dusha, qalabka iyo qalabka kale, calaamadaha ayaa noqon kara daciif. Haddii aad ogaatid in aad leedahay meel aad u dhimatay (ama, inta badan, meel aad u gaabis ah), waxaad isku dayi kartaa inaad dib u soo celiso router si aad u aragto haddii kor u kiciyo xiriirka.
Waa maxay Xawaaraha Fiican?
Ka hor intaadan sheegin in iyo haddii aadan heleynin xawaare fiican, waxaad u baahan doontaa inaad ogaatid awoodaha xawaaraha ah ee isku-xirka Internet-kaaga. Tani waxay ka muuqan kartaa biilka Adeegga Internetka ee Internetka (ISP). Waxaad sidoo kale tijaabin kartaa xiriirintaada adigoo isticmaalaya mashiinka ama laptop-ka ee ku xiran shabakadaada adoo isticmaalaya cabirka Ethernet si toos ah ugu xiran router. Waxaad isticmaali kartaa naqshadda webka ee Ookla ee imtixaanka xawaaraha si aad u ogaato xadka ugu sareeya ee ku xiran kombuyuutarkaaga.
<3 Mbs . Dhibaatooyinkaaga waxaa ku jiri doona fiidiyoow waxaana laga yaabaa inaad la kulanto wakhtiyo gaaban oo lagu dhejinayo bogagga shabakadda ama muusikada. Waxay qaadataa 1.5 Mbs si aad u hesho codka maqalka ee Pandora, Spotify, Apple Music iyo barnaamijyada kale ee muusikada ah . Si kastaba ha noqotee, haddii aad si joogto ah uga hooseyso 3 Mbs, waxaa laga yaabaa inaad la kulanto arimo dhowr ah marka xiriirkaaga Internetku uu ka soo kabanayo inta u dhexeysa 1 iyo 2 Mbs.
3-5 Mbs . Waa inaad noqotaa muusiko toos ah oo lagu dhejiyo bogagga shabakadda, laakiin wali waxay la kulmi doonaan arrimaha la socota fiidiyoowga waxaana laga yaabaa in tayada hoos loogu dhigo YouTube iyo bixiyeyaasha kale.
6-10 Mbs . Daawashada fiidiyowga waa inay noqotaa mid cidhiidhi ah, laakiin waxaad yeelan kartaa dhibaatooyin aad u socoto fiidiyoowyo tayo sare leh oo ka socda qalab badan. Tani waa xawaare fiican haddii aad kaliya daadiso Netflix ama Hulu Plus hal telefishan ama kiniin ah mar.
11-25 MBS . Dhab ahaantii, waxaad u baahan doontaa 10+ MBS si aad u hubiso in aadan helin bogga hoos udhaca video tayada HD ama si aad u socodsiisid qalabyo badan hal mar.
25+ Mbs . Tani waa xawaaraha aad u socon karto 4K ama video UHD. Sidoo kale waa inaadan haysan wax dhibaato ah oo la xidhiidha qalabyo badan iyo fiidiyoowga laga soocayo ilo dhawr ah.
Diyaarso "Ha illoobin wakhtiga Ping!
Waqtiga "Ping" wuxuu kaloo noqon karaa tilmaame muhiim ah. Inkasta oo xadhigga xawaaraha uu cabbirayo inta xogta la soo dejin karo ama la soo dejin karo isla waqtigaas, 'Ping' ayaa qiyaasaya latency ee xidhiidhkaaga, taas oo ah waqtiga uu u qaato macluumaadka ama macluumaadka si aad u hesho iyo ka soo-wadaha siriyeyaasha fog. Tani waa mid aad u muhiim ah, gaar ahaan haddii aad ku ciyaarto ciyaaro badan oo badan. Waa inaad heshaa waqtiga Ping oo ka yar 100 malyan oo loogu talagalay isku xirnaanta inteeda badan. Wax kasta oo ka badan oo laga yaabo in la ogaado, iyo wax kasta oo ka sarreeya 150 waxa ay keeni kartaa in la ogaado marka uu ciyaarayo cayaaro fara badan.
Wow. I & # 39; m Goynta Burburin Lahaanshaha My Laptop!
Xaqiiqdii waxay suurtogal u tahay in aad ka sarreyso "ugu badnaan" iPad-kaaga haddii aad haysato qaab cusub oo router-gaagu uu ku taageerayo isticmaalka anteeno badan. Tani waxay guud ahaan tahay kiiska udub dhexaadiyeyaasha laba-kooxood ee daabaca 2.4 iyo 5 GHz. Asal ahaan, iPad-gaagu wuxuu laba jeer isku xiraa router isla markaana isticmaalaya isla waqti isku mid ah.
Tani waxaa loo isticmaali karaa farsamo si loo dedejiyo Wi-Fi-gaaga haddii aad dhibaato ku qabtid. Habka ugu cusub ee 802.11ac xitaa waxay isticmaalaan tiknoolaji furan si ay diiradda saaraan qalabka ku jira qalabkaaga. Laakiin waa inaad leedahay lataliye cusub oo taageera istaandarka iyo iPad cusub oo taageera. IPad-ka ayaa taageeray tiknoolajiyadda tan iyo iPad Air 2 iyo iPad mini 4, sidaas darteed haddii aad leedahay mid ka mid ah kuwan ama iPad-ka cusub sida iPad Pro-yada waaweyn , waxaad taageeri kartaa jadwalka cusub.
I & # 39; m Helitaanka Xawaaraha Xiisadda. Hadda maxaa?
Haddii baaritaanadaada ay muujiyaan iPad-gaaga oo gaabinaya, ha baqin. Bedelkeed, dib u bilaabo iPad-kaaga oo dib loo dhigo imtixaanada. Tani waxay xallin doontaa dhibaatooyinka ugu badan, laakiin haddii aad wali wali xallinayso, waxaad isku dayi kartaa inaad bedesho goobaha shabakadda iPad-ka . Waxaad sameyn kartaa tan adigoo furaya app Settings, doorasho Guud ka soo bidixda menu-ka ka dibna Ka-soo-cesho goobaha Guud. Shaashadda cusub, dooro "Soodhadhka Shabakadaha". Waxaad u baahan doontaa inaad gasho marinka Wi-Fi-ga mar kale ka dib markaad dooranaysid, sidaas darteed hubso inaad ogtahay furaha sirta.
Waa inaad sidoo kale isku daydaa inaad dib u dhigto router-gaaga. Mararka qaar, jadwalka waayeelka ah ama ka jaban ayaa hoos u dhigi kara waqtiga dheeriga ah, gaar ahaan haddii ay jiraan aalado badan oo isku xiraya router.
Tusaha Isticmaal Cusub ee iPad-ka
Safarka Guud ee iPadka
Maxay iPad u taageeraan Flash?
Dejinta ama Beddelida iPad-ka Qashinka iyo Faraha
Dhibaatooyinka Ciladaha Kodak
Dib u eegista AIM
Hordhac Naqshadaha Naqshadeynta Sawirka
13 Siyaabaha Aad Kiciso Kombiyuutarkaaga
Tafatir Music, Sound ama Other Audio Settings ee PowerPoint 2010
Noocyada ugu Fiican ee Buugaagta
Sidee ayaad u heli kartaa cinwaanka IP ee Website kasta oo kaliya oo ku yaal tiro kooban
Sidee u Habboon Si Loo-shaqeeyahaagu u Baahan Yahay Inuu Noqdo
Adeegga Internetka ee DSL oo lacag la'aan ah ma jiraa?
Isku-xirka Nidaamka Kumbiyuutarka Hoose (SCSI)
Websaydhin aan faa'iido lahayn: Tobanaad Waxaad Rabto Inaad Booqato (Laga Yaabo)
Sidee Isbeddelka Heerarka U-Helitaanka Web-yada ay saameyn karaan Websiteka
Pioneer VSX-530-K 5.1 Aqoonsiga Tiyaatarka Kanaalka
Maxay Faylka MNY?
Sida loo xiro Xiriir qoraal ah oo ku yaal Email leh Mac OS X Mail
Maxay tahay DNS (Domain Name System)?
Dib u eegista 5-aad ee iPod Touch
Sidee loo tirtiraa Vista Vista SP2
Boog loogu talagalay Webka Mobile
Martin Logan Motion Vision X Aqoonsiga Barafka ah
Isbedelka "motd" si aad u muujiso farriinta gaarka ah ee Maalinta